६ वर्षदेखि आफ्नै पिसाब पिइरहेका छन् डेव, आखिर किन ?
Wednesday, 1 Nov, 2017 2:06 PM
विश्वमा कतिपय यस्ता व्यक्ति छन् जसका गतिबिधीबाट आम मान्छेहरु आश्चर्यमा पर्छन् । कोही केबल चर्चामा आउन अनौठा काम गर्न तयार हुन्छन् भने कोही आफ्नो व्यक्तिगत सन्तुष्टी र स्वास्थ्य लाभका लागि । हामी आज डेव मर्फी नामका व्यक्तिको अनौठो गतिबिधीबारे जानकारी दिन खोज्दै छौं ।
डेव बेलायती हुन् । उनी नियमित आफ्नै पिसाब पिउँछन् । तर, पानी भने पिउँदैनन् । सुन्दा दुनियाँ छक पर्ने यो गतिबिधी डेव किन गरिरहेछन् ? आफ्नै पिसाब पिउने, तर पानी नपिउने उनको ‘लाइफस्टाइल’ पछाडिको रहस्य के छ ?
डेव आफ्नै पिसाब पिउनुलाई एक प्रकारको थेरापी मान्छन् । यसले उनलाई निकै फाइदा पनि पुगेको छ । ‘पिसाब पिउन सुरु गरेपछि, मेरा कयौं रोग निको भएको छ,’ उनले जवाफ दिने गरेका छन् विगत ६ वर्षदेखि निरन्तर आफ्नै पिसाब पिउँदै आएका पनि उनी बताउँछन् ।
रोग निको हुहन्छ भन्दैमा उनको कुरा कसरी पत्याउने ? तर, यस्ता व्यक्तिलाई डेवले आफ्नो रोगबारे बताइदिने गरेका पनि छन् । आफू विगतमा दमको रोगी भएको र पिसाब पिउन सुरु गरेपछि समस्या धेरै हदसम्म नियन्त्रण हुँदै गएको र अहिले ठीक भएको बताउँछन् । ‘आफ्नै पिसाब पिउन थालेपछि मेरो दमरोग निको भएको छ । दमको समस्या भएकाहरुलाई पिसाब पिउन सल्लाह पनि दिन्छु,’ डेव भन्छन् ।
पिसाब सेवनपछि दम निको पार्न मात्रै सफल भएनन् । उनकाअनुसार यो निरन्तरताकै कारण ५० किलो तौल पनि कम भएको छ । पहिले निकै बढी तौलका उनले ६ वर्षको अन्तरालमा ५० किलोसम्म तौल घटाएको दाबी गरेका छन् ।
डेव पिसाब पिउनेमात्रै होइन, पिसाबले नै नुहाउने पनि गर्छन् । पिसाबको यस्तो प्रयोग उनले सन् २०११ देखि गर्दै आएका हुन् । एजेन्सी